Flowers Krismasy Edition |
Flowers Krismasy Edition
Flowers dia iray amin'ireo Top Slots UK izay novolavolaina tamin'ny NetEnt. Amin'ny vanim-potoana Krismasy ny eto, slot izany no natao mba ho mifanaraka amin'ny toe-po ny Krismasy, ary aoka mpilalao handresy ny tsy ampoizina izay efa foana miandry. Misy voninkazo tsara tarehy ny reels sy ny fototra maneho ny hatsaran-tarehy ny io fety be nandrasana hatry in Flowers Krismasy Edition. Ny Krismasy ravaka Azo antoka fa hahazoana mpilalao ho any amin'ny fety isan-toe-po tamin'ny kofehy ireny.
koa, Misy lafiny mahafinaritra izay hitondra Fandresena goavana ho an'ny mpilalao. Get vonona handresy ny sasany valisoa lehibe sy mankafy ny lalao traikefa toy ny tsy rahateo fa niaraka io dikan-Top Slots UK lalao . Ny vanim-potoana miramirana dia antoka ho anareo amin'ny lafin-javatra io dia ny nampananana harena slot amin'ny. Noho izany, jaigrafy ka hiomana ho mendrika miaraka slot ity lalao.
More amin'ny Developer ny Voninkazo Krismasy Edition
Powered by NetEnt, Flowers Krismasy Edition dia voly Top Slots UK ho indulged amin'ny. NetEnt foana no fantatra ny hatsaran'ny lalao izany mamorona ary ho azo antoka fa amin'ny tsirairay lalao Casino izy ireo hampivelatra, mpilalao hiaina lalao mahafinaritra traikefa.
Momba ny Gameplay sy ny Ahoana ny Play
Izany mampientanentana Top Slots UK dia ahitana ny 5 reels ary 30 paylines, ary misy marika isan-karazany izay manana Fandresena lehibe ho an'ny mpilalao hisambotra ny. The reels teo amin'ny hazo sisintany izay voaravaka ny rakitra ao amin'ny Krismasy sy ny reels composant ny ambony sy ny ambany karama marika.
Ny fandresena azo Nampiroborobo vola avy hatrany amin'ny marika isan-karazany izay ny slot dia ahitana ny. Ny voninkazo isan-karazany tsy mitovy soatoavina isan-, vakio ny paytable ny mahafantatra ny soatoavina izay mihazona tsirairay.
Ny volana no Santa ny satroka dia ny bibidia ao slot ity lalao ary dia soloina ny hafa mba hamita mba handresena ao tsikombakomba. Ny aelezo dia ny rahona, maimaim-poana koa ny mariky spins satria mitaky mpilalao ho ao an-maimaim-poana spins manodidina izay hatao ny Fandresena maro, ary avo roa heny.
ny tampon-tanety, manahaka, maimaim-poana spins no valisoa endri-javatra sy ny fihodinana ao slot ity lalao ary dia avy hatrany dia hampitombo ny fandresena vola.
Play Flowers Krismasy Edition amin'ny Coinfalls Casino sy mahazo mihazona ny maro Fandresena miaraka amin'ny endri-javatra isan-karazany ao amin'ny Top Slots UK slot lalao. Aoka ny Krismasy jiro hitondra mahagaga Fandresena ho anao amin'ny isan-kofehy ireny.